अमेरिकी डलरसहित विदेशी मुद्राको भाउ बढ्यो | Makalukhabar.com
अमेरिकी डलरसहित विदेशी मुद्राको भाउ बढ्यो
काठमाडौं, २६ फाल्गुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि एक अमेरीकी डलरको खरिद मूल्य १११ रुपैयाँ ९४ पैसा तोकेको छ । यसैगरी बिक्री मूल्य ११२ रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको छ जुन शुक्रबारको तुलनामा केहि बढेको हो । यस्तै, एक युरोको खरिददर १२५ रुपैयाँ ५८ पैसा छ भने बिक्रिदर १२६ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ ।
एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १४६ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रिदर १४७ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ । यसैगरी जापानीज १० यनको खरिददर १० रुपैयाँ ०६ पैसा छ भने बिक्रिदर १० रुपैयाँ १२ पैसा रहेको छ ।
कतारी एक रियालको खरिददर ३० रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ । यसैगरी कुवेती एक दिनारको खरिददर ३६८ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रिदर ३७० रुपैयाँ ०९ पैसा रहेको छ ।
जेठ ९, काठमाडाैँ । नेपाल बङ्गलादेश बैंकले जेठ १० गते शुक्रबार देखि २० लाख युनिट (इकाई) ऋणपत्रको बिक्री खुला गरेको छ । यस मध्ये १२ लाख युनिट डिबेन्चरले हुन आउने कुल रु. १ अर्ब २० करोड ऋणपूँजी रकम विभिन्न व्यक्ति वा संघ संस्थाहरुलाई व्यक्तिगत तवर (Private Placement) को माध्यमबाट तथा ८ लाख युनिट डिबेन... जारी राख्नुहोस...
आज अमेरिकी डलरसहित रियाल, रिंगिट लगायतका विदेशी मुद्राको भाउ कति ?
काठमाडौं, ९ जेठ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अमेरीकी डलरको खरिद मूल्य १११ रुपैयाँ १६ पैसा तोकेको छ । यसैगरी बिक्री मूल्य १११ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ । एक युरोको खरिददर १२४ रुपैयाँ ११ पैसा छ भने बिक्रिदर १२४ रुपैयाँ ७८ पैसा रहेको छ । कतारी एक रियालको खरिददर ३० रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ६... जारी राख्नुहोस...
अमेरिकी डलरसहित विदेशी मुद्राको भाउ घट्यो
काठमाडौं, ८ जेठ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अमेरीकी डलरको खरिद मूल्य १११ रुपैयाँ २४ पैसा तोकेको छ । यसैगरी बिक्री मूल्य १११ रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ । एक युरोको खरिददर १२३ रुपैयाँ ९९ पैसा छ भने बिक्रिदर १२४ रुपैयाँ ६६ पैसा रहेको छ । कतारी एक रियालको खरिददर ३० रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ७... जारी राख्नुहोस...
एन आई सी एशियाको नयाँ शाखा काठमाडौंको टोखामा
जेठ ७, काठमाडौं । ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा समेत आफ्नो उपस्थितिलाई थप दरिलो बनाउने क्रमसँगै एन आई सी एशिया बैंकले टोखा नगरपालिकामा नयाँ शाखा कार्यालय सुरु गरेको छ । आज उक्त शाखा कार्यालयको आज औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ । काठमाडौं जिल्ला, टोखा नगरपालिका वडा नं. ६, टोखा शाखाको उद्घाटन टोखा नगरपालिकाक... जारी राख्नुहोस...
एलआईसी नेपालको अध्यक्षमा एम.आर. कुमार नियुक्त
जेठ ७, काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेडको अध्यक्षमा एमआर कुमार नियुक्त भएका छन् । लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको बैठकले ०७६ जेठ २ गतेदेखि लागु हुने गरी बीमकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा एमआर कुमारलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । नवनियुक्त अध्यक्ष एमआर एलआईसी अफ इण्डिया... जारी राख्नुहोस...
शेयर बजार चार अंकले बढ्योः नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज
जेठ ७, काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा मंगलबार शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ४.४२ विन्दुले बढेर एक हजार ३१२.१४ अङ्कमा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.११ ले वृद्धि भई २७९.९१ अङ... जारी राख्नुहोस...
आइएमई पे द्वारा “जे पे गर्दा पनि आइएमई पे” सुविधाको सञ्चालन
जेठ ७, काठमाडौँ ।आइएमई पे द्वारा “जे पे गर्दा पनि आइएमई पे” सुविधाको सञ्चालनमाआएको छ । मोबाइलबाट नै विभिन्न बिलको भुक्तानी गर्न सकिने डिजिटल सुविधाहरूमा हाल ‘आइएमई पे’ को नाम अहिले चर्चामा रहेकाे छ । गुगल प्ले र एप स्टोरबाट सजिलै डाउनलोड गरि प्रयोग गर्न सकिने ‘आइएमई प... जारी राख्नुहोस...
कुलमान भन्छन्– भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए झुण्डिएर मर्छु
जेठ ७, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए झुण्डिएर मर्ने चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशक कुलमानले प्राधिकरणभित्र आफूले भ्रष्टाचार गरेको ठहरिए झुण्डिएर मर्ने चेतावनी दिएका हुन्... जारी राख्नुहोस...
काठमाडौं, ७ जेठ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अमेरीकी डलरको खरिद मूल्य १११ रुपैयाँ २८ पैसा तोकेको छ । यसैगरी बिक्री मूल्य १११ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ । एक युरोको खरिददर १२४ रुपैयाँ १८ पैसा छ भने बिक्रिदर १२५ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको छ । कतारी एक रियालको खरिददर ३० रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ७... जारी राख्नुहोस...